သင့်ကို သူစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာ (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုဖတ်နိုင်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာ သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရူးအမူး ဖြစ်နေတယ်။ သင့်စိတ်ထဲကနေ သူကို့ မထုတ်နိုင်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် သူကကော သင့်ကို စဉ်းစားပေးနေသလား? ဒီအရာတွေ သင့်ရဲ့ relationship မှာ ဖြစ်ပျက်နေရင် အဖြေက Yes ဖြစ်တယ်လို့ အလောင်းအစားလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ သင့်အကြောင်းကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေ သိထားကြတယ်
သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ သင်ဆုံမိတဲ့အခါ သူတို့က “ဟယ်၊ နင်အလုပ်ရာထူးတိုးပြီဆို ” (သို့) “အားလပ်ရပ်မှာ ပျော်ခဲ့လား” လို့မေးပါမယ်။ သူတို့ကို သင်ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါက ရှင်းပါတယ်။ သင့်ကောင်လေးက သူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူတွေကို သင့်အကြောင်း ဖောက်သည်ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သူက သင့်ဆီကို ရောက်တတ်ရာရာ မက်ဆေ့ချ်တွေ ပို့ပေးတယ်
သူက သင့်အား တကယ်အရေးပါတဲ့ အရာတွေအကြောင်း ပြောဆိုသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်ချစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သူသိနေတဲ့ ရယ်စရာ ခွေးmemes ပုံလေးတွေ ပို့ပေးတယ်၊ တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေ ပို့ပေးတယ်။ သူက သူဖတ်နေတဲ့ စာအုပ် (သို့) သူသောက်နေတဲ့ ကော်ဖီပုံလေးတွေတောင် ပို့ပေးနေတတ်ပါတယ်။ သင့်အား သူမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေမှာ ပါဝင်စေလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သူ့မှတ်ဉာဏ်က အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဖြစ်နေတာ
တစ်ခါတုန်းက သူ့ကို ‘ဘယ်ရီသီးတွေ မစားနိုင်ကြောင်း’ (ဒါမှမဟုတ်) ‘ မြို့ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်အသစ်ကို သွားချင်တဲ့အကြောင်း’ သင်ပြောခဲ့မှာပါ။ အဲဒါကို သူတကယ်မှတ်မိနေတယ်။ ဒါက သူဟာ သင့်ကို တကယ်ဂရုစိုက်ပြီး သင်ပြောတဲ့အရာတွေကို မှတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။
၄။ သင့်ကို ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်တတ်တာ
သူ့တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်တဲ့အခါနဲ့ သူ မျှဝေလိုတဲ့အခါမှာ သင့်ကို အရင်ဆုံးဖုန်းခေါ်တတ်ပါတယ်၊ ဒါက သူ့စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပထမဆုံးနာမည်က သင်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သူဟာ အခြားသူတွေနဲ့ သတင်းမျှဝေဖို့ စိတ်ကူးမရပါဘူး။
၅။ သင့်ရဲ့ ပို့စ်တွေကို ” Likes” ပေးတယ်
သူဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အမြဲတမ်းရှိနေမှာ မဟုတ်ပေမယ့် များသောအားဖြင့် သင့်ရဲ့ ပို့စ်တွေပါ်မှာ “Like” (သို့) “Comment” ပေးဖို့ ပထမဆုံးလူတစ်ယောက်လို ခံစားရရင် သူဟာ သင့်အကြောင်း ဘယ်လောက်စဉ်းစားနေသလဲဆိုတာ သိနိုင်မယ့်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ သင့်ကို အမြဲတမ်း check လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ သူဟာ အမြဲတမ်း စကားတည်ပါတယ်
သူက နောက်တစ်နေ့မှာ သင့်ကိုဖုန်းခေါ်မယ်ပြောရင် သူဖုန်းခေါ်ပေးပါတယ်။ မလိမ်ဘူး၊ ဆင်ခြေမပေးဘူး။ ဒါက သူဟာ သင့်အားစဉ်းစားနေရုံမကပဲ သင်နဲ့အတူ စစ်မှန်တဲ့အနာဂတ်ကို တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ သင်နှစ်သက်လိမ့်မယ့် လက်ဆောင်လေးတွေ ပို့ပေးပါတယ်
ဒီလူက သင့်ကို အနီရောင်နှင်းဆီပန်းစည်းတွေ၊ ချောကလက်ဘူးတွေ ပေးပို့လိမ့်မယ့် ကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ သူပေးမယ့် လက်ဆောင်တွေက အမြဲတမ်းအတွေးပါတဲ့၊ အဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့ လက်ဆောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက သင်နှစ်သက်တဲ့အရာကို သိပြီး သင့်ကိုပျော်ရွင်စေဖို့ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
၈။ သူက ကောင်လေးတွေနဲ့ night out သွားရင် စာပို့တတ်ပါတယ်
Relaionship တစ်ခုမှာ space အနည်းငယ်ထားရှိခြင်းက အရေးပါတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပေမယ့်လည်း သူဟာ တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ (သို့) အခြားသူတွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင် စာပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက relationship မှာ သင့်ကိုလုံခြုံမှု ခံစားရစေဖို့ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
၉။ သူက သင့်ကို မြင်တွေ့ဖို့ အကြောင်းပြချက် ရှာတတ်ပါတယ်
သူ့ကို ရပ်ကွက်ထဲမှာ (သို့) သင့်အလုပ်ခွင်နားမှာ အမြဲတမ်းမြင်နေရတတ်သလား? သေချာတာပေါ့။ သူက သင့်ကို တွေ့ရဖို့ (သို့) သင့်ကိုခေါ်ဖို့ ဘယ်ဆင်ခြေမဆို ရှာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတကယ်တော့ ချိုမြိန်ပါတယ်။
၁၀။ သူက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိုင်တိုင်တွေကို သတိရတတ်ပါတယ်
သင်နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာ (သို့) သင်ပထမဆုံးအနမ်းပေးလိုက်တဲ့နေရာကို သူမှတ်မိနေသလား? ဒါက ရိုမန့်တစ်ဆန်ပေမယ့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူအလေးအနက်ထားကြောင်း ပြသနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။